Project Opensky 777 vakananga kunhare swich dambudziko.
mubvunzo Project Opensky 777 vakananga kunhare swich dambudziko.
1 gore 10 ago #662 by ricsmi
Yakadhindwa uye yakabhururuka Project Opensky Boeing 777 nhasi uye ine ndege yakanaka, dambudziko rega randinenge ndiri naro nderokuti kuburitsa shingaira hakuiti kushanda.
Ita pilot yemotokari pane imwecheteyo uye sarudzai musoro waunoda uye fambisa kubata swich sezvaunenge uri mune dzimwe ndege, asi inongovhara pane imwe nzira yemazuva ano, ndakamboedza mhando dzose asi inogara ichiita chinhu chimwechete .
Chero pfungwa dzevarume, ndeye chirwere kana ndiri kungoita zvakaipa here?
1 gore 10 ago #664 by ricsmi
Ok Ndakatarisa, ndinobva ndoda kushandisa Nav Select button, kwete iyo nav, asi chinhu chete chinonzi Nave select button chinoshanda chete muIndaneti ye 2d iyo ini ndisingagoni kumira ndichiishandisa.
Saka ini ndichadzokorora mubvunzo wangu, chero ani zvake anoziva kana zvichikwanisika kuparadzanisa nebhu mubhodhi yepamberi ye3d kuenda kus navigation yevas nav panzvimbo?
Time chokusika peji: 0.452 mumasekonzi